I rentedamotorbike to travel around the Mandalay City Myanmar . It’s very convenient . Best Choice ! Thanks for watching. Subscribe for more awesome videos.
https://www.facebook.com/1519557931680912/posts/2423663567937006/ The Guys from Mandalay 1950s မှာယူဖို့ အဆင်သင့်ပဲလား🧨 TGFM စာအုပ်များကို အောက်ပါအစီအစဉ်တိုင်း ထုတ်ဝေဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ 👇👇👇 ✅ကြိုတင်အမှာစတင်ကောက်ယူမည့်နေ့ ၂၀၂၀- စက်တင်ဘာ ၂၅ (မနက် ၁၀ နာရီ) ✅ကြိုတင်အမှာ ပိတ်မည့်နေ့ ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက် ✅စာအုပ်စတင်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ ✅ကြိုတင်အမှာများကို စောစောမှာတဲ့သူဆီကို စောစောပို့တဲ့ စနစ်နဲ့ ပို့ဆောင်သွားမှာပါ။ ကြိုတင်အမှာကောက်ယူတဲ့ကာလကို အချိန် တစ်လကျော်ယူထားပါတယ်။ အဆိုပါ အချိန်တစ်လကျော်အတွင်း ဆရာခက်ဇော်ကနေ ကြိုတင်အမှာ စာအုပ်တိုင်းမှာ လက်မှတ်များ သေချာရေးထိုးပေးသွားမှာ ဖြစ်သလို စာမှတ်ကတ်လက်ဆောင်လည်း ပါဝင်မှာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း ပို့ခ အခမဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ✅စောစောမှာစောစောရောက်ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ နေ့စဉ် အမှာများကို နေ့အလိုက် မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အရင်ဆုံးမှာတဲ့သူတိုင်းကို အရင်ဆုံး ပို့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် မိမိတို့မှာယူတဲ့ ဒေသအလိုက် စာအုပ်ရောက်မယ့်အချိန်တော့မတူနိုင်ပါဘူး။ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ မှာတဲ့အချိန်တူပေမယ့် ရန်ကုန်ကအမှာနဲ့ ကော့သောင်းက အမှာနဲ့ကတော့ ရောက်မယ့်အချိန်တူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ✅ရန်ကုန်ကနေ မှာယူသူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်ကတော့ ကြိုတင်အမှာများကို စာအုပ်ရတဲ့နေ့မှာ ဦးဦးဖျားဖျား ဖတ်ချင်ရင် Yangon Book Plaza မှာ အမှာ Code နံပါတ်များပြပြီး ထုတ်ယူနိုင်မှာပါ။ (မက်ဆင်ဂျာ Bot နဲ့မှာမှသာ Code ရမှာပါဖြစ်တဲ့အတွက် မက်ဆင်ဂျာ Bot နဲ့သာ ဦးစားပေးမှာယူပေးပါရန်) (နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ထက် စောပြီး ရမှာပါ) အိမ်တိုင်ရာရောက်ပဲ ယူမယ်ဆိုရင်လည်း အိမ်ကို ပို့ပေးမှာပါ။ ✅ဘယ်လိုမှာရမလဲ မနက်ဖြန် ပရီအော်ဒါကောက်တဲ့အခါ WE Distribution မက်ဆင်ဂျာ Bot လေးရဲ့ လင့်ခ်တစ်ခု ထည့်ပေးသွားမှာပါ။ အဲ့ဒီလင့်ခ်ကနေ မှာယူပေးရမှာပါ။ ✅ဖုန်း၊ အွန်လိုင်မက်ဆင်ဂျာတို့ကနေလည်း မှာယူလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မက်ဆင်ဂျာ Bot နဲ့ပဲ ဦးစားပေးမှာယူပေးစေလိုပါတယ်။ အခုကာလမှာ ဝန်ထမ်းတွေကို ကန့်သတ်လုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တာကြောင့် မက်ဆင်ဂျာ အမှာများကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ပြန်ဆိုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ https://www.facebook.com/1519557931680912/posts/2423663567937006/
Our time in Myanmar has already been amazing, and Mandalay made it even more special! After takingabus ride up from Yangon, we explore the city center and get to experience some beautiful cultural traditions, such as wearingalongyi and getting thanaka put on. Thanks so much for watching! Don’t forget to like and subscribe :) ------------------------------------------------------------------------------ Hi! We’re Jack and Gab,agoofy American couple from San Diego, California. Working long hours atadesk job made us feel like life was passing us by, so in June 2019, we quit our jobs and bookedaone-way ticket to travel the world. We’ve been on the road ever since! We’re passionate about visiting under-the-radar destinations. There are so many incredible hidden gems in the world that have yet to be discovered by the masses! We are also big supporters of sustainable tourism and environmental conservation. KEEP US ON THE ROAD! Support us on Patreon :) https://www.patreon.com/jackandgabexplore SIGN UP FOR OUR EMAIL NEWSLETTER! https://jackandgabexplore.com/email-newsletter/ GET YOUR AIRBNB DISCOUNT HERE: https://abnb.me/e/1bSKmtJQp4 ALL OUR MUSIC IS EPIDEMIC SOUND - SIGN UP HERE: https://bit.ly/2wbN2c8 CAMERA EQUIPMENT: https://jackandgabexplore.com/our-equipment/ SOCIAL MEDIA ACCOUNTS :) https://www.instagram.com/jackandgabexplore/ https://www.facebook.com/jackgabexplore/ https://www.pinterest.com/jackandgabexplore/ https://twitter.com/jackgabexplore
Myanmar security forces shot dead several protesters in Mandalay. (Video - AFP) ===================================== 🔔 Please SUBSCRIBE Mizzima TV channel for Daily Update News and Entertainment TV programs. ✅ Visit to our Official website: https://www.mizzimaburmese.com ✅ Mizzima TV Application FREE download : https://bit.ly/30qmeCn ✅ Follow us on our Facebook Mizzima News in Burmese : https://www.facebook.com/MizzimaDaily/ Mizzima TV : https://www.facebook.com/mizzimatvchannel/
#military_coup_myanmar #what_happening_in_myanmar #စစ်အာဏာရှင် 17 Feb 21. Military (Myanmar) shot civilians in Mandalay. မန္တလေး မီးရထားဝန်းမှာ အကြမ်းဖက်နေပြီ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ လက်နက်မဲ့ပြည်သူကို လက်နက်အားကိုးနဲ့ အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ စစ်အာဏာရူး
Mandalay City | Motorcycle Tour 2019
The Guys from Mandalay 1950s စ/ဆုံး
https://www.facebook.com/1519557931680912/posts/2423663567937006/ The Guys from Mandalay 1950s မှာယူဖို့ အဆင်သင့်ပဲလား🧨 TGFM စာအုပ်များကို အောက်ပါအစီအစဉ်တိုင်း ထုတ်ဝေဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ 👇👇👇 ✅ကြိုတင်အမှာစတင်ကောက်ယူမည့်နေ့ ၂၀၂၀- စက်တင်ဘာ ၂၅ (မနက် ၁၀ နာရီ) ✅ကြိုတင်အမှာ ပိတ်မည့်နေ့ ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက် ✅စာအုပ်စတင်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ ✅ကြိုတင်အမှာများကို စောစောမှာတဲ့သူဆီကို စောစောပို့တဲ့ စနစ်နဲ့ ပို့ဆောင်သွားမှာပါ။ ကြိုတင်အမှာကောက်ယူတဲ့ကာလကို အချိန် တစ်လကျော်ယူထားပါတယ်။ အဆိုပါ အချိန်တစ်လကျော်အတွင်း ဆရာခက်ဇော်ကနေ ကြိုတင်အမှာ စာအုပ်တိုင်းမှာ လက်မှတ်များ သေချာရေးထိုးပေးသွားမှာ ဖြစ်သလို စာမှတ်ကတ်လက်ဆောင်လည်း ပါဝင်မှာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း ပို့ခ အခမဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ✅စောစောမှာစောစောရောက်ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ နေ့စဉ် အမှာများကို နေ့အလိုက် မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အရင်ဆုံးမှာတဲ့သူတိုင်းကိ...
Our time in Myanmar has already been amazing, and Mandalay made it even more special! After takingabus ride up from Yangon, we explore the city center and get to experience some beautiful cultural traditions, such as wearingalongyi and getting thanaka put on. Thanks so much for watching! Don’t forget to like and subscribe :) ------------------------------------------------------------------------------ Hi! We’re Jack and Gab,agoofy American couple from San Diego, California. Working long hours atadesk job made us feel like life was passing us by, so in June 2019, we quit our jobs and bookedaone-way ticket to travel the world. We’ve been on the road ever since! We’re passionate about visiting under-the-radar destinations. There are so many incredible hidden gems in the world t...
17 Feb 21. Military (Myanmar) shot civilians in Mandalay. မန္တလေး မီးရထားဝန်းမှာ အကြမ်းဖက်နေပြီ
https://m.facebook.com/angel.da.338211 #Myanmar_Mandalay #MilitaryCoup #3/3/2021 #RestInPeace
I rentedamotorbike to travel around the Mandalay City Myanmar . It’s very convenient . Best Choice ! Thanks for watching. Subscribe for more awesome videos....
https://www.facebook.com/1519557931680912/posts/2423663567937006/ The Guys from Mandalay 1950s မှာယူဖို့ အဆင်သင့်ပဲလား🧨 TGFM စာအုပ်များကို အောက်ပါအစီအစဉ်တိုင်း ...
Our time in Myanmar has already been amazing, and Mandalay made it even more special! After takingabus ride up from Yangon, we explore the city center and get...
Myanmar security forces shot dead several protesters in Mandalay. (Video - AFP) ===================================== 🔔 Please SUBSCRIBE Mizzima TV channel for ...
#military_coup_myanmar #what_happening_in_myanmar #စစ်အာဏာရှင် 17 Feb 21. Military (Myanmar) shot civilians in Mandalay. မန္တလေး မီးရထားဝန်းမှာ အကြမ်းဖက်နေပြီ ...
Beautiful performance by Charles Dance. All rights belong to Neflix. No copyright infrigh...
I rentedamotorbike to travel around the Mandalay City Myanmar . It’s very convenient . B...
https://www.facebook.com/1519557931680912/posts/2423663567937006/ The Guys from Mandalay 1...
Our time in Myanmar has already been amazing, and Mandalay made it even more special! Afte...
Myanmar security forces shot dead several protesters in Mandalay. (Video - AFP) ==========...
#military_coup_myanmar #what_happening_in_myanmar #စစ်အာဏာရှင် 17 Feb 21. Military (Myanm...
https://m.facebook.com/angel.da.338211 #Myanmar_Mandalay #MilitaryCoup #3/3/2021 #RestInPe...
The Crown - Lord Mountbatten sings "The Road to Ma...
Mandalay City | Motorcycle Tour 2019...
The Guys from Mandalay 1950s စ/ဆုံး...
Traveling to MANDALAY, MYANMAR...
Security forces shoot dead protesters, smash vehic...
17 Feb 21. Military (Myanmar) shot civilians in Ma...